Dagaal u dhaxeeya Ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Somaliland oo ka socda Tukaraq | Jowhar Somali News Leader
Home SOMALI Dagaal u dhaxeeya Ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Somaliland oo ka socda...
Dagaal u dhaxeeya Ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Somaliland oo ka socda Tukaraq
Wararka ka imaanaya Gobolka Sool ayaa sheegaya in dagaalo ay dib uga soo cusboonaadeen deegaanadii dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay isku hor-fadhiyeen Ciidamo kala taabacsan maamulada Somaliland iyo Puntland.
Sida ay sheegayaan wararka dagaal culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka socda aagga deegaanka Tukaraq oo bishii January ee sanadkan ay la wareegeen Somaliland, kaddib duulaan ay ku soo qaadeen.
Dadka deegaanka Sool ayaa ku soo waramaya in dagaalka uu bilowday subaxnimadii hore ee saaka, labada ciidan ee is horfadhiyana ay isu adeegsanayaan hub cul culus, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka uu ku sii fido goobo hor leh.
Madaxtooyada Puntland ayaa war ka soo saartay dagaalka, waxayna ku eedeysay Somaliland inay dagaalka soo qaaday, waxaa ay Puntland intaa ku dartay inay in muddo ah ka baaqsaneysay daadashada dagaal uu dhiig ku daato oo ay ku dhintaan dad Soomaaliyeed.
Saraakiil ka tirsan Somaliland ayaa sheegay in dagaalka saakay ay soo qaadeen Ciidamada Puntland, lana soo weeraray difaacyada ay ku jireen ciidamadooda.
Waxaa la soo sheegayaa inuu jiro khasaare labada dhinac ka soo gaaray dagaalka, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn inta uu gaarsiisan yahay.
Dagaalka dib uga soo cusboonaaday deegaanka Tukaraq ayaa ku soo beegmay, iyadoo dhowaan Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating uu booqasho ku tagay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa, isagoo kala hadlay Madaxda maamulada Somaliland iyo Puntland sidii xiisada labada dhinac u dhaxeysa loo qaboojin lahaa, lana kala qaadi lahaa ciidamada is hor fadhiya.
Previous articleMunaasabad lagu xusayay 15-ka May ee aas aaska Ururkii SYL oo xalay ka dhacay Muqdisho
Next articleAxmed Madoobe “Dowladdu waxay aad mashquul ugu tahay doorashada 2020 iyo cidii imaan laheyd”